FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiBhulu IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMalagasy IsiMyanmar IsiNgesi IsiNorway IsiOromo IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTahiti IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTwi IsiUkrainian IsiVietnam IsiXhosa IsiZulu isi-Igbo
“Xa ndigoduka sele kuhlwile, abahlobo bam babedla ngokundikhapha. Kodwa ngenye imini ndandidiniwe ndaza ndagqiba kwelokuba ndikhwele iteksi.
Umqhubi weteksi akazange andigoduse. Wandisa ethafeni elithile waza wazama ukundidlwengula. Ndakhala esimantshiyane waza wandiyeka. Xa waphinda wasondela, ndasitsho isikhalo kwakhona ndaza ndabaleka.
Ndandikade ndisithi, ‘Kunceda ngantoni ukukhala?’ Kodwa oku kwandifundisa ukuba nyhani kuyasebenza!”—KARIN. *
KUMAZWE amaninzi, ulwaphulo-mthetho luyingxaki. Ngokomzekelo, ijaji yelinye ilizwe yakha yathi: “Into ebuhlungu kukuba wonke umntu uyazi ukuba ngenye imini uza kuba lixhoba.” Kwezinye iindawo aluxhaphakanga kangako ulwaphulo-mthetho. Sekunjalo, asibobulumko ukungakhathali kuba loo nto inokukubeka esichengeni.
Enoba uhlala kwindawo ekugquba ulwaphulo-mthetho okanye akunjalo, unokuzikhusela njani wena kunye nabahlobo okanye izalamane zakho? Enye yezinto onokuzenza kukuphulaphula eli cebiso leBhayibhile: “Umfo ohlakaniphileyo uthi akuyibona isiza ingozi ayiphephe; ke yena ongaqondiyo uthwabaza aye kungena kuyo aze ke eve ubuhlungu yiloo nto.” (IMizekeliso 22:3, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996) Namapolisa athi sifanele sizikhusele kulwaphulo-mthetho ngokuphepha iimeko ezinokusibeka esichengeni.
Ulwaphulo-mthetho alubangeli ukwenzakala emzimbeni nokulahlekelwa zizinto zakho kuphela. Amaxhoba amaninzi adla ngokwenzakala engqondweni nangokweemvakalelo. Kubalulekile ke ngoko ukuba senze konke okusemandleni ethu ukuze sizikhusele! Ngoku makhe sithethe ngezinto onokuzenza ukuze uzikhusele kwiintlobo ezine zolwaphulo-mthetho—ukuphangwa, ukuhlaselwa ngokwesini, ubuqhetseba obenziwa ngekhompyutha kunye nokubiwa kweenkcukacha zakho zize zisetyenziswe kakubi.
Kuyintoni? Ukuphangwa kukuhluthwa kwezinto zakho.
Kwenza wuphi umonakalo ebantwini? Emva kweziganeko ezininzi zokuphangwa kwabantu eNgilani, omnye umtshutshisi wathi onke amaxhoba onzakala engqondweni nangona engazange onzakaliswe emzimbeni. Wathi: “Uninzi lwawo luthi alukwazi kulala yaye onke athi oku kubuphazamise gqitha ubomi bawo.”
Amasela asoloko ekhangela izisulu; ngoko yazi into eqhubeka kufutshane nawe
Lumka. Amasela alibona emanzini ithuba. Ayakuthanda ukuhlasela abantu abangaphaphanga. Ngoko babek’ esweni abantu abakujongileyo uze ujonge yonke into eqhubeka kufutshane nawe, yaye musa ukuzibeka engozini ngokusela kakhulu okanye ngokusebenzisa iziyobisi. Enye intyila-lwazi yezempilo ithi, “kuba nzima ngomntu osela utywala okanye osebenzisa iziyobisi ukucinga kakuhle aze ayibone ingozi.”
Khusela izinto zakho. Khusela imoto, iingcango kunye neefestile zekhaya lakho. Ungaze ungenise umntu ongamaziyo. Musa ukuzibeka ekuhleni izinto zakho zexabiso. IMizekeliso 11:2 ithi: “Bunabathozamileyo ubulumko.” Amasela—kuquka abantwana abacela amalizo—badla ngokuya ebantwini abanxibe izacholo okanye abaphethe izinto ezinjengeeselfowuni zexabiso.
Funa icebiso. “Indlela yesidenge ilungile emehlweni aso, kodwa ophulaphula icebiso sisilumko.” (IMizekeliso 12:15) Ukuba utyelele endaweni ethile, liphulaphule icebiso labantu abahlala apho kunye nabasemagunyeni. Banokukuchazela ngeendawo ofanele uzilumkele nangendlela onokuzikhusela ngayo izinto zakho.
Kuyintoni? Ukuhlaselwa ngokwesini akuphelelanga nje ekudlwengulweni kodwa kuquka nezinye iintlobo zokuhlaselwa ngokwesini, njengokunyanzelwa nokoyikiswa.
Kwenza wuphi umonakalo ebantwaini? Omnye umntu owadlwengulwayo uthi: “Eyona nto ibuhlungu kukuba le nto ayikho buhlungu nje ngexesha isenzeka ngalo. Kodwa ihlala engqondweni ize iqhubeke ikungcungcuthekisa ixesha elide yaye iyayitshintsha indlela obujonga ngayo ubomi. Itshintsha nobomi babantu abakuthandayo.” Liyinyaniso elokuba ixhoba alifanele libekwe ityala ngenxa yokuhlaselwa ngokwesini. Lonke ityala likulo ulihlaseleyo.
Ziphulaphule iimvakalelo zakho. Amapolisa esikhululo saseNorth Carolina eMerika athi: “Ukuba uziva ungakhululekanga endaweni ethile okanye ukuba kukho umntu omkrokrelayo—hamba kuloo ndawo. Musa ukuvumela nabani na akweyisele ukuba uhlale xa kukho into ethi hamba.”
Musa ukuphakuzela. Abantu abahlasela abantu ngokwesini badla ngokukhangela abantu ababonakala bezizisulu. Ngoko hamba ngokuzithemba, phapha uze unxibe ngendlela enesidima.
Zikhusele ngoko nangoko. Yitsho esona sikhalo sakha sasikhulu. (Duteronomi 22:25-27) Baleka okanye ulwe ngoko nangoko. Ukuba kunokwenzeka, balekela kwindawo ekhuselekileyo uze ubize amapolisa. *
UBUQHETSEBA OBENZIWA NGEKHOMPYUTHA
Buyintoni? Obu buqhetseba benziwa kwi-Intanethi. Buquka ukungahlawulwa kwerhafu, ukubiwa kwemali, ubuqhetseba obubandakanya icredit card kunye nokungathunyelwa kwezinto eziodiweyo. Kukwaquka nokuqhathwa kwabantu kusithiwa mabatyale imali yabo baza kufumana inzala, kunye nokuthengiswa kwezinto nge-Intanethi.
Benza wuphi umonakalo ebantwini? Ubuqhetseba obenziwa ngekhompyutha benza amaxhoba kunye nabanye abantu balahlekelwe ziibhiliyoni zeerandi. Makhe sithethe ngalo mzekelo. USandra wafumana i-e-mail awayecinga ukuba ivela kwibhanki yakhe imcela ukuba afake iinkcukacha zeakhawunti yakhe yebhanki esebenzisa i-Intanethi. Kwimizuzwana nje emva kokuba ethumele iinkcukacha zakhe, wothuswa kukubona ukuba kutsalwe iR32,000 kwiakhawunti yakhe yaza yafakwa kwiakhawunti yebhanki yelinye ilizwe. USandra wakhawuleza wabona ukuba ugqunyuziwe.
Lumka! Musa ukuqhathwa ziiWebhsayithi ezibonakala ngathi zezokwenene yaye khumbula ukuba ibhanki ayinakuze ikucele ukuba ubhale inkcazelo yakho eyimfihlo kwi-e-mail. Ngaphambi kokuba uthenge okanye utyale imali usebenzisa i-Intanethi, phanda ukuba loo nkampani yaziwa kangakanani. IMizekeliso 14:15 ithi: “Nabani na ongenamava ukholwa ngamazwi onke, kodwa onobuqili uyawaqwalasela amanyathelo akhe.” Lumka xa ushishina okanye uthenga izinto kwiinkampani ezikwamanye amazwe. Xa kuvela iingxaki, kudla ngokuba nzima ukuzicombulula.
Phanda ngaloo nkampani. Zibuze: ‘Ziphi izakhiwo zale nkampani? Ngaba ichanile inombolo yayo yefowuni? Ngaba bachaze yonke imali endifanele ndiyihlawule xa ndithenga le nto? Baza kuyithumela nini le nto ndiyiodileyo? Ngaba ndingakwazi ukuyiphindisa okanye ndibuyiselwe imali yam?’
Balumkele abantu abakuthembisa izulu nomhlaba. Amasela asebenzisa i-Intanethi ayabathanda abantu ababawayo okanye abathanda izisulu. Ezinye zezinto asenokukuloba ngazo ziquka ukukuthembisa imali eninzi ngokwenza nje umsebenzi omncinci, ukubolekwa imali okanye ufumane icredit card nangona ungafaneleki ukuyifumana okanye bathi uza kufumana imali eninzi xa utyale nje encinane. IU.S. Federal Trade Commission (FTC) ithi: “Phanda ngokucokisekileyo ngaphambi kokuba uvume ukutyala imali yakho. Ukuba uthenjiswa intywenka yemali, yazi ukuba maninzi namathuba okuba itshone imali yakho. Musa ukuvumela lowo ukuxelela ngethuba lokutyala imali akuqhathe ufake imali yakho ngaphambi kokuba uqiniseke ukuba loo nkampani yeyokwenene.”
UKUBIWA KWEENKCUKACHA ZAKHO
Kuyintoni? Ukuba iinkcukacha zomntu othile kuquka ukufumana ngondlela-mnyama inkcazelo yakhe yobuqu uze uyisebenzise ukuze wenze ubuqhetseba obuthile okanye olunye uhlobo lolwaphulo-mthetho.
Kwenza wuphi omonakalo ebantwini? Amasela asenokusebenzisa iinkcukacha zakho ukuze enze icredit card, aboleke imali okanye avule iiakhawunti. Emva koko unokuzibhaqa sele unetyala lemali elingangentaba! Enoba elo tyala lingacinywa, kunokuthatha ixesha ngaphambi kokuba igama lakho lisuswe kuluhlu lwabantu abaziwa ngokungahlawuli. Omnye umntu owakha waba lixhoba lokubiwa kweenkcukacha uthi: “Ukufakwa kwegama lakho kuluhlu lwabantu abaziwa ngokungahlawuli konakalisa yonke into—kubuhlungu nangaphezu kokubelwa imali.”
Yikhusele inkcazelo yakho ebalulekileyo. Ukuba ubhanka okanye uthenga izinto usebenzisa i-Intanethi, yitshintshe rhoqo ipassword yakho, ingakumbi ukuba ukhe wasebenzisa ikhompyutha esetyenziswa nguwonkewonke. Njengoko sele sitshilo ngaphambili, zilumkele ii-e-mail ezikucela ukuba uchaze iinkcukacha zakho eziyimfihlo.
Abantu abeba iinkcukacha zabantu eziyimfihlo abasebenzisi ikhompyutha kuphela. Bazama onke amacebo ukuze babe iincwadi okanye amaphepha abalulekileyo, njengezitetimenti zebhanki, iincwadi zetsheke, iicredit card kunye nenombolo oyisebenzisa ukuze ufumane imali yesibonelelo. Zigcine kwindawo ekhuselekileyo zonke ezi zinto uze uwatshise onke amaphepha asesichengeni sokubiwa yimigewu, xa ungasawasebenzisi. Xa ukrokrela ukuba iphepha elithile elibalulekileyo libiwe okanye lilahlekile, chazela abasemagunyeni ngoko nangoko.
Zihlole rhoqo iiakhawunti zakho. IFTC ebesiyicaphule ngaphambili ithi: “Kuyanceda ukuyihlola rhoqo into eyenzeka kwiiakhawunti zakho. Ukukhawuleza ubone ukuba kukho umntu ozenza wena kuyanceda.” Ngoko zihlole rhoqo iiakhawunti zakho uze ulumke xa kukho into engaqondakaliyo eyenziwe kuzo. Ukuba unako, cela ikopi yerisithi echaza yonke into eyenziwe ngecredit card yakho uze uqiniseke ukuba uyazazi zonke iiakhawunti neentlawulo ezenziwe ngegama lakho.
Liyinyaniso elokuba kweli hlabathi siphila kulo akukho nto unokuqiniseka ngayo. Nabona bantu balumkileyo bakhe bagqejwa olungophiyo. Nakuba kunjalo, kusoloko kuluncedo ukusebenzisa amacebiso nobulumko obubhalwe eBhayibhileni. “Musa ukubushiya, buya kukugcina. Buthande, buya kukulondoloza.” (IMizekeliso 4:6) Okumnandi nangakumbi kukuba iBhayibhile isithembisa ukuba luza kuphela ulwaphulo-mthetho.
Ulwaphulo-mthetho Luza Kuphela Kungekudala
Yintoni esenza siqiniseke ukuba uThixo uza kulusiphula neengcambu ulwaphulo-mthetho? Khawuv’ ukuba kuthiwani apha ngezantsi:
UThixo ufuna ukuluphelisa ulwaphulo-mthetho. “Mna, Yehova, ndithanda okusesikweni, ndikuthiyile ukuphanga kunye nentswela-bulungisa.”—Isaya 61:8.
Unamandla okuphelisa ulwaphulo-mthetho. “Amandla akhe amtsho angafikeleleki; usulungekile, ebalasele ngobulungisa, akukho bani amcinezelayo.”—Yobhi 37:23, IBhayibhile YesiXhosa Yowe-1996.
Uthembisa ukuyitshabalalisa imigewu aze ashiye amalungisa. “Abenzi bobubi baya kunqunyulwa.” “Amalungisa aya kuwudla ilifa umhlaba, ahlale kuwo ngonaphakade.”—INdumiso 37:9, 29.
Uthembisa abakhonzi bakhe ngehlabathi elitsha elinoxolo. “Abalulamileyo baya kuwudla ilifa umhlaba, baziyolise ngokugqibeleleyo ngobuninzi boxolo.”—INdumiso 37:11.
Ngaba loo mazwi ayakuthuthuzela? Ukuba kunjalo, funda iBhayibhile ukuze uve ezinye izinto afuna ukuzenzela abantu uThixo. Ayikho enye incwadi efundisa ubulumko njengeBhayibhile. Ngaphezu koko, ayikho enye incwadi esenza sibe nethemba lokupheliswa kolwaphulo-mthetho njengayo. *
UThixo uthembisa ukuba uza kuzisa ihlabathi elitsha apho kungayi kubakho lwaphulo-mthetho
^ isiqe. 5 Amagama atshintshiwe.
^ isiqe. 22 Amaxhoba amaninzi okuhlaselwa ngokwesini ahlaselwa ngumntu amaziyo. Ukuze wazi okungakumbi, funda inqaku elinomxholo othi “Ndinokuzikhusela Njani Kubantu Abaxhaphaza Abantwana Ngokwesini” kwiphepha 228 lencwadi ethi Imibuzo Yabantu Abaselula—Iimpendulo Eziluncedo, Umqulu 1. Le ncwadi iyafumaneka kwi-www.jw.org/xh.
^ isiqe. 44 Unokufunda izinto ezingakumbi ezifundiswa yiBhayibhile kwincwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Cela amaNgqina kaYehova akunike ikopi yasimahla okanye uzifundele kwi-www.jw.org/xh.
Text Iimpapasho onokuzikhuphela UVUKANI! Meyi 2013 | Zikhusele Kulwaphulo-mthetho!